नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु , ७ हजार ७ सय ४८ जना संक्रमित – BFM 91.2
विराटनगर, ४ असार । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको गोदावरी ४ का ४६ वर्षीय पुरुष र कैलालीकै लम्किचुहा २ का ४३ वर्षिया महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको हो ।
दुबै जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो । स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ती पुरुष कैलालीकै नजजीवन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । जेठ ३१ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको असार ३ गते बेलुकी निधन भएको हो ।
यस्तै लम्की चुहा नगरपालिकाकी महिलाको टाउकोमा चोट लागे पनि उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो । जेठ ३१ गते भर्ना भएकी महिलाको असार २ गते सर्जरी गर्नुअघि नमुना संकलन गरिएको थियो । उनको असार २ गते नै मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।
भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा असार ३ गते कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको थियो । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २२ पुगेको छ । आज नेपालमा ६ सय ७१ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । प्रवक्ता गौतमका अनुसार देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा ६ सय ७१ जनामा संक्रमण देखिएको हो ।
यो अहिलेसम्मकै एकैदिन संक्रमण देखिएको उच्च संख्या हो । योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ७ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ । प्रदेश १ मा ४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । मोरंगमा २ र झापामा २ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
आज संक्रमण देखिएकामा विराटनगर १३ की एक महिला र उनका ८ महिनाको छोरा रहेका छन् । उनीहरु केही समय अघि भारतको सिलगुढीबाट आएका थिए । आज झापा हल्दिवारीका २ महिला पनि संक्रमण देखिएको छ । प्रदेश १ मा ४ जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या ४ सय २० पुगेको छ ।
← प्रदेश नं. १ प्रदेशसभा बजेटबारे आजपनि छलफल
रेडियो रिपोर्ट प्रभाव : वीएफएमका कारण हामीले राहत पायौं →